I-china Aluminium Complex Panel Alucosun
I-Alucosun inikezela ngokusesikweni ngokusebenza ngokungafaniyo kwemibala eyahlukeneyo kunye nokukhethwa kokugqiba okwenziweyo. I-Alucosun ikwanikezela ukuthembeka kwintsebenzo ngomhlaba oqinileyo kodwa oguqukayo kunye nomongo. Ngapha koko abameli beAlucosun bahlala kwinkonzo yabathengi ngolwazi lwemveliso yobungcali kunye neengcebiso ezifanelekileyo xa kufuneka njalo.
I-Alucosun iphumelele ngempumelelo enkulu ngokungenasiphelo kwimveliso nakwinkonzo, njengoko kunjalo nangokuzibophelela kwakho kwimpumelelo yakho kule minyaka ingama-20 idlulileyo.
● Umphezulu ogudileyo kakhulu kunye nemibala eyahlukeneyo:
Sinokubonelela ngemibala ye-RAL kunye nePantone, kubandakanya i-gloss ephezulu (i-85-95%), i-mat gloss, ibrashi, isipili, kunye nebhodi egqityiweyo eyenziwe ngomthi kwaye ilungiselelwe iimfuno zakho.
● Ubukhulu obahlukeneyo:
Ububanzi buvela kwi-1000mm ukuya kwi-2000mm. Ubude bungenziwa ngokwezifiso zakho ngaphaya kobukhulu obuqhelekileyo ngokweendlela zokusebenza.
● Ukuxhathisa kwemozulu ephezulu kunye nokuxhathisa ukuxhathisa:
Unyango oluphezulu ngesicelo sepeyinti ye-polyester enganyangekiyo ye-ultraviolet (ECCA), isiqinisekiso seminyaka eyi-8-10; ukuba usebenzisa ipeyinti ye-KYNAR 500 PVDF, eqinisekisiweyo eyi-15-20 iminyaka.
● Ukuqhubekeka ngokulula kunye neendlela ezahlukeneyo:
Ingacutshungulwa kwiifom ezahlukeneyo kwaye ingaqwalaselwa ngokusika, ukugoba, ukubetha, ukunamathela kunye nokupeyinta.
Indawo yethu yokuvelisa eco-friendly kunye nongcoliseko zero
Ubungakanani besikhumba seAluminiyam
I-1000mm, 1220mm, 1250mm,
Ubushushu boTyhso lobushushu
Ukutsha komlingani okwaneleyo
Ukusebenza koxinzelelo lomoya ukuxhathisa
Iipropati ezichasene naManzi
Egqithileyo China OEM Wood Umbala Acp-Alucosun PE-Alucosun
Okulandelayo: IPHEPHA LOKUXELWA KWI-ALUMINUM
Iphaneli yeAluminiyam edibeneyo 3mm
Amaphepha e-Aluminium edibeneyo yePaneli
Iphaneli edibeneyo yeAluminiyam yeHoneycomb
IPaneli yeAluminiyam engacimiyo
Iphaneli yokuDibanisa iAluminiyam